21ရာစုမှာမွေးဖွားလာတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်များရဲ့တီထွင်မှုများ – XB Media Myanmar
တချို့တီထွင်မှုတွေဟာ နာမည်ကြီးကျော်ကြားစေရုံသာမကပဲ ငွေကြေးအရပါအောင်မြင်စေပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ ကိုယ်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့လောက်ပဲ စိတ်ကူးဥာဏ်ကွန့်မြူးပြီး ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ၊ ပစ္စည်းအပျက်တွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုပြီလုပ်ထားတဲ့အသုံးအဆောင်တွေနဲ့အိုင်ဒီယာဆန်းဆန်းလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးသိအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1. ကုန်ချင်ဦးဟဲ့ အိမ်သာသုံးတစ်သျှူး
အိမ်သာတတ်နေတုန်းမှာ တစ်သျှူးကုန်သွားတာမျိုးကြုံဘူးကြလား ဒီဥာဏ်ကြီးရှင်ကတော့ အဲ့ဒီလို ခဏခဏကြုံဖူးနေတယ်ထင်တယ်။ သူရဲ့ဒုက္ခကိုသူဖြေရှင်းပုံကလည်း တစ်မျိုးပဲနော် ။ ကျနော်တို့ဆိုရင်ရော ဒီလိုအကြံမျိုးထွက်ပါ့မလား မသိဘူးနော်။
2. အိပ်ရာထနောက်ကျတယ် မြှားဘူးရှာမတွေ့ဘူး
ဒီဥာဏ်ကြီးရှင်က တော့ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် မိန်းမရဲ့ဆူပူမှုကိုခံရလားမပြောတတ်ဘူးနော် ။ ကျနော်သာသူ့မိန်းမနေရာမှာဆိုရင်တော့ အတော်စိတ်ဆိုးနေမှာပဲ။ဒါပေမယ့် သူကတော့သူ့အခက်အခဲကိုသူဖြေရှင်းလိုက်ပုံက သဘောကျစရာပါပဲ ။ဘာပဲပြောပြာ သူ့ဟာသူအဆင်ပြေသွားတာပါပဲလေ။
၉နှစ်သားအရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့တီထွင်မှုတစ်ခုပါ။ ဒီရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဆိုတာက လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ဘာပဲပြောပြောသူစက်ဘီးလေးကိုသူပြန်စီးလို့ရသွားတာပဲ။သူလည်း အသိမှတ်ပြုရမယ့်ဥာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ပါ။
အင်္ကျီလက်ကြယ်သီးတွေခဏခဏပြုတ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အဆင်လည်းပြေ တော်ရုံလက်မောင်းတုတ်ချင်သူတွေအတွက်ကတော့ Gym သွားစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူး ။ သူလည်းပဲ ဥာဏ်ကြီးရှင်စာရင်းမှာထည့်ထားရမယ့်သူတစ်ယောက်ပါ။
ခပ်ချေချေ ခပ်မြင့်မြင့် လေဒီတစ်ယောက်အတွက် သူ့ယောက်ျားကအထူးဖန်တီးပေးထားရတာထင်ပါတယ်။ သူ့ကလည်းခေသူမဟုတ်ပါပဲနော်။ သင့်အိမ်မှာ၊သင့်အသိတွေထဲမှာရော ရေပန်းနဲ့မှရေချိုးတတ်တဲ့သူတွေရှိသလား ။ ရှိရင် ဒါမျိုးလေးသာလုပ်ပေးလိုက်ကြပါ။
တခြို့တီထှငျမှုတှဟော နာမညျကွီးကြျောကွားစရေုံသာမကပဲ ငှကွေေးအရပါအောငျမွငျစပေါတယျ။ တခြို့တှကေတော့ ကိုယျအတှကျလိုအပျခကျြတဈခုဖွညျ့ဆညျးနိုငျဖို့လောကျပဲ စိတျကူးဉာဏျကှနျ့မွူးပွီး ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးလေးတှေ ၊ ပစ်စညျးအပကျြတှကေို ပွနျလညျအသုံးပွုပွီလုပျထားတဲ့အသုံးအဆောငျတှနေဲ့အိုငျဒီယာဆနျးဆနျးလေးတှကေိုပရိသတျကွီးသိအောငျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
1. ကုနျခငျြဦးဟဲ့ အိမျသာသုံးတဈသြှူး
အိမျသာတတျနတေုနျးမှာ တဈသြှူးကုနျသှားတာမြိုးကွုံဘူးကွလား ဒီဉာဏျကွီးရှငျကတော့ အဲ့ဒီလို ခဏခဏကွုံဖူးနတေယျထငျတယျ။ သူရဲ့ဒုက်ခကိုသူဖွရှေငျးပုံကလညျး တဈမြိုးပဲနျော ။ ကနြျောတို့ဆိုရငျရော ဒီလိုအကွံမြိုးထှကျပါ့မလား မသိဘူးနျော။
2. အိပျရာထနောကျကတြယျ မွှားဘူးရှာမတှဘေူ့း
ဒီဉာဏျကွီးရှငျက တော့ အိမျပွနျရောကျရငျ မိနျးမရဲ့ဆူပူမှုကိုခံရလားမပွောတတျဘူးနျော ။ ကနြျောသာသူ့မိနျးမနရောမှာဆိုရငျတော့ အတျောစိတျဆိုးနမှောပဲ။ဒါပမေယျ့ သူကတော့သူ့အခကျအခဲကိုသူဖွရှေငျးလိုကျပုံက သဘောကစြရာပါပဲ ။ဘာပဲပွောပွာ သူ့ဟာသူအဆငျပွသှေားတာပါပဲလေ။
၉နှဈသားအရှယျကောငျလေးတဈယောကျရဲ့တီထှငျမှုတဈခုပါ။ ဒီရှယျလေးနဲ့ဒီလိုစဉျးစားနိုငျဖို့ဆိုတာက လှယျတဲ့ကိစ်စတော့မဟုတျပါဘူး ။ဘာပဲပွောပွောသူစကျဘီးလေးကိုသူပွနျစီးလို့ရသှားတာပဲ။သူလညျး အသိမှတျပွုရမယျ့ဉာဏျကွီးရှငျတဈယောကျပါ။
အကငြ်္ီလကျကွယျသီးတှခေဏခဏပွုတျတတျတဲ့သူတှအေတှကျတော့ အဆငျလညျးပွေ တျောရုံလကျမောငျးတုတျခငျြသူတှအေတှကျကတော့ Gym သှားစရာတောငျလိုမယျမထငျပါဘူး ။ သူလညျးပဲ ဉာဏျကွီးရှငျစာရငျးမှာထညျ့ထားရမယျ့သူတဈယောကျပါ။
ခပျခခြေေ ခပျမွငျ့မွငျ့ လဒေီတဈယောကျအတှကျ သူ့ယောကျြားကအထူးဖနျတီးပေးထားရတာထငျပါတယျ။ သူ့ကလညျးခသေူမဟုတျပါပဲနျော။ သငျ့အိမျမှာ၊သငျ့အသိတှထေဲမှာရော ရပေနျးနဲ့မှရခြေိုးတတျတဲ့သူတှရှေိသလား ။ ရှိရငျ ဒါမြိုးလေးသာလုပျပေးလိုကျကွပါ။
ချစ်သူ ကောင်မလေးကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ နေဒွေး
Voteတစ်သိန်းဖိုး ပေးခဲ့တဲ့သူက အခွေတစ်ခွေ ၂၅၀၀ ဝယ်ဖိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့ ရဲနောင်